I-septum ye-nasal yiplati ehlula isango esiswini kwisahlulo esibini esilinganayo. Ukukhawuleka kwalo kubangela ukuphulwa okungafaniyo kokuphefumula, nokuba kukho iimeko apho akunakwenzeka ukuphefumula.
Ngako oko, ukuthambekela kwezifo eziphazamisayo kunye nokuvuvukala kwenkqubo yokuphefumula, ukunyuka kwamakhanda, oku kukukhokelela ekuphuhlisweni kweemeko ezingathandekiyo, kunye nokuphazanyiswa kwe-genitourinary and cardiovascular system. Ukuguqulwa kwe-septum yangasese kungenzeka ngenxa yokukhula okungalinganiyo kwesikhumba ebusweni ngexesha lomncinci okanye umonakalo kwimpumlo.
Kutheni kukho i-curvature ye-septum nasum?
Xa usemncinci, le ngxaki ayiyinto engavamile. Iingxaki ezininzi nge-septum yangasese zikhula zisusela kwiminyaka eyi-13 ukuya kwe-18.
Iingcali ezininzi zithi isizathu sokukhawuleka kwe-external-right-correlation phakathi kokukhula kwamathambo e-craneal and facial skeleton, ngoko ke, i-septum yangasese igugu ngenxa yokuba isiqalo sayo sincinci. Abanye oogqirha baqinisekisa ukuba oku kungenxa yokukhula okungalunganga okanye ukungalingani kwee-septum ngokwayo.
Inendima enkulu kwi-curvature ye-septum yangasese idlala ngengozi. Amadoda abhekana nalokhu ngokuphindaphindiweyo kunabesifazane besithathu. Oku kuphakamisa ukuba isini sesini sininzi esingalimli kangako kunendoda.
Iimpawu zohluthwa ngamanzi
Iingxaki ngokuphefumla. Kukho nobunzima obuncinane ekuphefumuleni nasekuphumeni ngokupheleleyo. Ukuba i-septum yangasese ivalwe ukusuka kwicala, ngoko ubunzima bokuphefumula kuya kubonakala ukusuka kwesobunxele okanye kwesigxina sempumlo. Kwiimeko ezinjalo, isigulane sinokumangaliswa xa ugqirha ugxininisa ukubhala ngenxa yokuba impumlo iphefumula kakuhle. Enyanisweni, umntu uyaguqula kwaye akaqapheli ukuba unengxaki kwi-septum yangasese. Kukho iimeko apho, ngempumlo enkulu, ukuphefumla akuphazamiseki ngenxa yendawo enkulu. Ngamanye amagama, ukuba uphefumula kakuhle ngeempumlo zakho, oku akuthethi ukuba unalo ukuphazamiseka kwe-septum nasum.
Ukulingana. Enye yezinto ezibangela ukunyanyisa yinkinga yokuphefumula.
Yomisa emlonyeni womlomo.
Izifo ezingapheliyo zesono sephunga - sinusitis, sinusitis, frontalitis, etmoiditis.
Ukukhubazeka kwempumlo. Ukulimala, ukuguquka kwempumlo, kuqondiswa ngakumbi ngakwesobunxele okanye ngakwesokudla.
Ukunyangwa kwe-nasal deformation deformation
Ukunyanga i-curvature ye-nasum ye-nasal idinga ukungenelelo ngoncedo-ukusetyenziswa kwe-endoscopic septoplasty. Ngethuba lokusebenza, akukho nto eyenziwe ngayo ebusweni, ngoko ukuma kwendoda kungasatshintshi. Ngokwenene, ubude bomsebenzi ngowama-30-60 imizuzu. Kuqhutyelwa phantsi kwe-aneshesia yendawo kunye neyonke. Umsebenzi uphela ekufakweni kwamacwecwe e-silicone akhethekileyo kwiimpumlo zeempumlo kunye ne-swaze swabs, ezisuswe ngomhla emva kokusebenza. Kule meko, isigulane sisekliniki kuphela ngosuku, kwaye emva kokusebenza, iveki enye iya kufuneka iguqulwe, ukwenzela ukuba iipikhi zikwazi ukuphiliswa ngokukhawuleza.
Ngoku phantse indlela ephela yokuphatha zonke i-vidoaskrivleniya nasal nasal i-submucosal resection. Ukuthengiswa kwameva kunye nemigqomo isetyenziselwa kuphela kwiimeko ezinqabileyo.
Ukuba i-septum imane iphihliwe, kwaye uyifumene ngengozi, ngoko ukuhlinzwa akudingeki. Kodwa ukuba kukho ukuphazamiseka ngokukhawuleza kwaye i-curvature ibonakala ngokucacileyo, ngoko kuyimfuneko ukuqwalasela into yokuba kunokubangela izifo zokusebenza. Kudala, ukusebenza kunzima kakhulu. Ukusebenza, okujoliswe ekuguquleni umzimba ukulungisa ukuphefumla komzimba kunye nokulungiswa kwakhona kwenkqubo yokuphefumula, akunakho ukunika umphumo oyifunayo. Yingakho kukulungele ukuphelisa ukukhawuleka kwintsana. Ukongezelela, kubalulekile ukwenza umsebenzi xa umntu ebusheni bakhe sele ecaleni ngokugqibeleleyo okanye ukugqibezela komgca kwelinye icala lempumlo ngenxa yokuguqulwa kwe-septum yangasese, nokuba uphefumula ngokukhululekile esinye isiqingatha sempumlo kwaye akayi kukhononda.
Kukho amaninzi amaninzi apho xa kutyalwa i-septum yangasese kukho i-hyperplasia ye-shell okanye i-shell egxile okanye i-sneezers kwicala elichasene ne-deformation. Ngokuqhelekileyo ngapha nangapha, kunzima ukuphefumla. Oku kuya kuqondwa ukuba unamathela kwi-spatula ebandayo ebomini kwaye ukhangele ubukhulu bendawo yomphunga xa uxhuma. Kule meko, ukuba kuphela ukuthengiswa komsebenzi, ukuphuculwa kobunzima bobuchule akuyi kuba kuphela kwicala apho kukho i-hypertrophy yamacol shells, kodwa nakwahlukileyo. Inyaniso kukuba iigobolphi ze-hypertrophies ziza kufaka i-septum, emva kokuba emva kokusebenza kuya kuhamba kwaye ayiyi kuvumela ukuba ikhule ibe yindawo ehlala kuyo. Ngoko ke, oogqirha bayincoma kunye kunye ne-resection ukuze bahambe nge-konkhotomiyu. Kulungile, kwaye kulula ukwenza oko kanye emva kokuthengiswa kwe-septum yangasese, ungayigxotha kuphela ngenxa yezizathu ezithile (ingozi yokuhlasela kwe-sinex, ukuphuma kwegazi okungavamile).
Ngokuqhelekileyo, xa iingxenye zangaphambili ze-septum yangasese ziphosakeleyo, kukho i-hypertrophy ye-shell, ekhoyo kwicala elincinci (le nto ichongwa nge-rhinoscope ngaphambi kokutyunjwa kwe-intanethi). Kwaye ukuba i-hypertrophy enjalo iboniswa kakhulu, ngoko kuyimfuneko ukuyiqeda ngokukhawuleza.
Ukuba, kwi-curvature, icala elincinci lingavumela emoyeni, kwaye elinye icala lixhaswa ngamagobolondo angama-hypertrophied, ngoko kwimeko kufuneka umntu enze kuqala kuphela i-concotomy. Ukuba oko kwakungeke kwanele, emva kweenyanga ezi-2-3 kufuneka wenze intengiso.
Ukuba umntu une-hypertrophic of tissuees, ke kufuneka ukuba anqunywe ngekisi okanye asuswe yi-galvanocauter, eyona nto ibhetele. Ngokuqhelekileyo kunzima ukuphelisa i-hypertrophic of tisses to the areas of posterior dentist. Ngokuqhelekileyo zinokufikelela kuphela emva kokuthengiswa. Ukutshabalalisa i-galvanocautery, kufuneka uqaphele ukuba ungagcini iigobolk ngexesha elinye, okanye kuya kuba ne synechia.
Ngokuqhelekileyo xa i-septum yangasese ikhubazekile, i-asymmetry ye bone bone. Xa i-septum iguqa, i-lavrinth latticed iyaba yinkulu kunezinye.
Kwiimeko ezinjalo, kuyimfuneko ukususa i-labyrinth ye-lattic kunye nokusebenza kwi-septum yangasese, kodwa ukuba kunokwenzeka, ngokususa igobolondo eliphakathi, kufuneka ubeke kuphela kwindawo ehamba phambili.
Ukongeza kwimiqondiso echazwe ngasentla ukwenzela ukuthengiswa kwe-septum yangasese, oku kungenelelo kufuneka kwenziwe njengelungiso lwemveliso yeminye imisebenzi okanye ukuze kuqinisekiswe iziphumo ezilungileyo zale misebenzi.
Imisebenzi yaloo hlobo ifaka i-autopsy ye-sinus eyintloko, ii-latticular iiseli kunye nesinasi yangaphambili, ukusebenza kwesikhwama esikhankwayo, kunye nabanye.
Kunqabile kakhulu ukuthengiswa kwe-septum yangasese eyenziwe ukwenzela ukuba kwenzeke ukuba i-catheter indlebe ifake i-tube yase-Eustachian.
Ngoxa silala, izinto ezintle zenzeke emzimbeni wethu ...
Ukuqhekeka kwe-anus, izilwanyana zamadoda
Iintlobo kunye neengxaki zeseva yesifo sengculaza
Indlela yokuphilisa i-hangover ekhaya
Izindlela zokusebenza kunye nokwesaba kwabantwana
Iimvumba kunye nokuba njani ukuzigqoka
Ziziphi izifo ezifihla ukulahlekelwa kwentloko?